Gandaki Sanchar » अब के होला ? देउवाले बोलाए शीर्ष नेतालाई बूढानीलकण्ठ
अब के होला ? देउवाले बोलाए शीर्ष नेतालाई बूढानीलकण्ठ
माघ ८, पर्वत । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बेलाएका छन् ।
बुधबार आज अपराह्न ३ बजे आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी विवाद र समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न नेताहरुलाई बोलाइएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
गत शनिबार स्वदेश फर्किएपछि उनी मङ्गलबार नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
यद्यपि अहिलेसम्म उपसभामुखबारे काँग्रेस नेताहरु र ओलीबीच कुनै छलफल भएको पाइँदैन । तर काँग्रेसले उपसभामुखमा नेकपाको आफूलाई सहयोग रहने विश्वास दिएको देखिन्छ । प्रचण्डसँगको भेटपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसको सङ्केत दिएका थिए । बैठकमा पौडेलले दिल्ली भ्रमण र प्रचण्डसँग भेटमा भएका कुराकानीबारे पार्टीलाई जानकारी गराउने बुझिएको छ ।
यस्तैस क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति निर्माण गर्न र विधानका दफा निलम्बनको निर्णय सच्याउने कुरामा देउवा पक्षले लचकता देखाएको छ ।
विभाग, नेविसङ्घ र तरुण दलमा गएको महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार सहमितिबाट अगाडि बढ्ने कुरामा देउवा, पौडेल र सिटौला पक्ष एक ठाउँमा देखिएका छन् ।रातोपाटीवाट सभार
प्रकाशित मिति ८ माघ २०७६, बुधबार ०८:५८